Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. कान्समा नेपाली फड्को – Emountain TV
कान्समा नेपाली फड्को
काठमाडौँ, ३० बैशाख । संसारकै प्रतिष्ठित मानिने कान्स फिल्म फेस्टिभलमा पहिलोपटक नेपाली सिर्जनाले बाजी मारेको छ । फेस्टिभलको सात दशक लामो इतिहासमै किरण पोखरेलको सर्ट फिल्म ‘विङ्स’ ले एउटा विधामा अवार्ड पाएको हो ।
कान्समा गएको तीन वर्षयता नयाँ विधा थपिएको थियो– नेस्प्रेसो ट्यालेन्ट इन्टरनेसनल कन्टेस्ट । यसमा उत्कृष्ट तीन प्रयोगात्मक फिल्मलाई पुरस्कार दिइन्छ । कान्सको ७१ औं संस्करणमा नेपाली फिल्म ‘विङ्स’ ले ग्रयान्ड प्राइज जित्यो । यसले निर्देशक किरण पोखरेललाई ५ हजार युरो (झन्डै साढे ६ लाख रुपैयाँ) र इन्टरनेसनल विनर ट्रफी दिलाएको छ ।
भर्टिकल फम्र्याटमा खिचिएको ३ मिनेटको फिल्मलाई ४० देशबाट प्राप्त करिब चार सय फिल्ममध्ये सर्वोत्कृष्ट घोषित गरिएको थियो । ‘भिसाको समस्या भएर म जान पाइनँ,’ निर्देशक पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘कस्तो ब्याड लक भयो । तर, यो अवार्डले मलाई उपलब्धि हासिल गरेको भन्दा पनि जिम्मेवारी थपिएको महसुस गराइरहेको छ ।’ आफ्नो पुरस्कार फ्रान्सका साथीले ग्रहण गरिदिएको उनले बताए ।
नेस्प्रेसोले दिएको ‘द डिफरेन्स सी मेक्स’ थिममा किरणले आफ्नै खुट्टामा उभिन चाहनेले एक विवाहित महिलाको कथा प्रस्तुत गरेका थिए । पतिले साथ नदिँदा उसले आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउन कस्तो कदम चाल्छे भन्ने विषयमा ‘विङ्स’ केन्द्रित छ । ‘तपाईंमा क्षमता छ भने बाँधिएर बस्नु पर्दैन भन्ने देखाउन खोजेको थिएँ,’ निर्देशकले भने, ‘थिमसँग म्याच भएछ । सिनेमाटिक एलिमेन्ट्स र मेटाफोर राम्रो भएकाले बेस्ट मानिएको होला ।’
आना जोल निर्देशित ‘हार्ट थेरापी’ र म्यान्स बर्थासको ‘आएल अफ काप्री’ रनर–अप घोषित भए । शुक्रबारको अवार्ड वितरण समारोहमा तिनले पनि ३ हजार युरो र ट्रफी पाएका थिए । अभिनेता भिन्सेन्ट पेरेज, निर्देशक टोनी मार्सल र इकोनोमिक डिभलप्मेन्ट स्पेसलिस्ट मिरियम साइन्ज निर्णायक टोलीमा थिए । तिनले केहीअघि किरणलाई फिल्मको केही अंश सम्पादन गर्नु भनेर इमेल पनि पठाएका थिए ।
‘तर, मलाई एडिट गर्न मन लागेन’, किरण भन्छन्, ‘भर्टिकल फम्र्याट (९:१६) मा फिल्म खिच्ने चलन छैन । भर्टिकलमै खिन्चुपर्ने नियमका कारण पहिले नै धेरै झन्झट भएको थियो । त्यसैले चलाउन मानिनँ । आई एम सरी लेखेर रिप्लाई गरेको थिएँ ।’ त्यो बेला उनलाई फिल्म कमजोर भएछ भन्ने लागेको थियो । तर, अहिले सम्झन्छन्, ‘निर्देशकले कत्तिको स्ट्यान्ड लिन्छ भनेर उनीहरूले मलाई चेक गरेका थिए जस्तो लाग्यो । अब एडिट गर्‍यो भने थिम मर्छ लेखेर पठाएको थिएँ ।’ पराम्परागत फिल्म मेकिङलाई चुनौती दिन नेस्प्रेसोले भर्टिकल फम्र्याट रोजेको यसको बेवसाइटमा उल्लेख छ । अचेल जे कुरा पनि भर्टिकल ठाडो आकार भइरहेका बेला फिल्मचाहिँ होरिजेन्टल तेर्सोमा सीमित हुन आवश्यक नभएको उसको मान्यता छ । मोबाइल, युटयुबतिर भर्टिकल आकार सजिलो हुन्छ । बढीमा तीन मिनेटको फिल्म नेस्प्रेसोले छान्ने गरेको छ । कान्तिपुरबाट